Hihaona vahiny mpankafy mpitari-dalana avy amin'ny"tompon-daka"- tompon-daka
Hihaona vahiny mpankafy mpitari-dalana avy amin’ny»tompon-daka»- tompon-daka
Baolina kitra mampiray sy manome fitiavana, fa Moskoa amin’izao fotoana izao fotsiny tondraky ny mpankafy avy amin’ny lafivalon’izao tontolo izao. Mandeha any Brezila tsy mba hijery ny lalao sy ny fifaliana noho ny ekipa, fa koa mba hihaona Breziliana tovovavy. Ny hatsaran-tarehy fantatra manerana izao tontolo izao, sy ho an’ny vahiny mpankafy tantara ny Breziliana ny hatsaran-tarehy no tena manonofy. Amin’ny maha-lohan ny mpitsara ny vehivavy tsara tarehy ao amin’ny»tompon-daka»andiany dia nampianatra ahy hianatra ny zava-miafina ny Breziliana tovovavy — ny fomba lakaoly vahiny. Eo ny tsy misy no tsy ampy, ka dia nanampy mahafinaritra roa ny ankizivavy. Hihaona Karina sy ny Catherine. Izy ireo amin-katsaram-panahy nanaiky ny alina iray ho lasa»shemdinani». Isika dia ho mandeha ao Nikolskaya an-dalambe tao Maosko, ary ny namany dia nampiseho fa be dia be ny ezaka mba ho tsy ilaina — ny vahiny dia manao ny zava-drehetra.
Ny zava-dehibe indrindra — ny safidy tsara. Ny fomba fiasa dia samy hafa ho an’ny olona rehetra. Karina misafidy ny mpankafy manerana ny firenena, izy tia ny aina any Soisa ary Portiogaly, ka mpankafy avy amin’ireo firenena ireo dia tiany. Kate voalohany ny rehetra mijery ny tarehiny, satria raha izany, ary ny tony ao amin’ny fitaovam-piadiana ny lehilahy tsara tarehy. Eto dia ny ambony vahiny mpankafy. Teny an-dalana, no tena malaza ao Arzantina dia lavitra, izay voalohany nilaza Pauline kuimova manokana ho an’ny mpamaky ny»tompon-daka». Tsara, isika kosa ny tranga — tena fotoana mba hanesorana ny vahiny. Raha ny fandehany fa vao telo didim-pitsarana. Ireo mpankafy avy any ivelany dia mety hampahasosotra sy mora-mandeha.
Ny tena fomba»Instagram»
Haingana manampy azy ireo namana sy eto ianao dia efa tsara. Ny fahalalana na teny vahiny dia lehibe bonus izay hanampy anao haingana dia haingana ny hanorina fifandraisana, fa ny mariky ny teny tsy be manasarotra ny asa. Ny ankizivavy dia tsy ilaina ny hanaovana ezaka be. Ny fitrandrahana mihitsy no eny an-tanany. Ny fomba tsotra indrindra dia ny mangataka ny mpiray sary. Taorian’ny roa sary ianao dia efa hihaona, ary dia toy izany dia esorina izany Breziliana. Raha toy ny vahiny — dia aza mandany fotoana, satria, tahaka ny fantatrareo ihany, ny vehivavy eto an-tany bebe kokoa noho ny lehilahy. Misy fahombiazana manatona ny fanontaniana ao ny vahoaka nandre ny resadresaka roa mahatalanjona ankizivavy izay niezaka hahatakatra, eo anoloan’ny azy ireo ho manan-karena Sheikh na olom-pirenena tsotra ao Arabia Saodita. Farany nahita ny mora vidy watch ary nanapa-kevitra ny»mihaza». Raha ny malaza indrindra ireo mpankafy avy any Arzantina, i Brezila, Meksika, Espaina sy Portogaly, ny tena tsy faly dia avy any Korea. Ny tovovavy tena tsy mandoa ny saina ho azy ireo. Tokana ny ankizivavy tonga Nikolskaya eny an-dalambe noho ny antony samihafa. Ny olona tena mitady fitiavana tampoka teo dia tonga avy any Brezila. Ny hafa mitady ho fohy ny fanitsakitsaham-bady. Ary ny olona mila ny manan-karena sponsor. Nefa minoa ahy, ireo»mpihaza»ianao dia hianatra avy hatrany. Aza mihevitra fa ratsy ny Breziliana tovovavy sy saintsaino momba ny fitondran-tena. Izy ireo hihaona olona vaovao, dia mahazo ny fihetseham-po sy mamirapiratra ny hevitra, satria ny Amboara eran-tany afa-tsy indray mandeha eo amin’ny fiainana. Tsy misy vahiny mpankafy tsy mba ho tsy mahalala fomba, na ho mahalala fomba ny ankizivavy. Raha ny fahitàna azy, taorian’ny zava-nitranga tany Marseilles, ny tany rehetra dia nahafantatra fa manana ny matanjaka sy mahery fo mpiaro. Fomba fijery: sary, fa aza mikasika. Tsy misy negativity — nifandray tanana, nifanakalo»instagram»na ny finday, izay naka ny sary, ny oroka teo amin’ny takolako izy, — ary afaka handeha lavitra kokoa. Maloto tena sleaze sy ny fahalalam — dia tsy nahita izany, toy izany koa ny tovovavy aza matahotra. Ny Amboara eran-tany any Brezila, dia ho avy indray tsy ho ela